Forest nchara mbanye anataghị ikike ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Forest Nchara mbanye anataghị ikike
Were oge ahụ ma were oge dị ukwuu na-egwuri egwu nchara - zụta Key Key Product Key taa!
Soro ndị egwuregwu kachasị mma n'ụwa nwere ike ịta ahụhụ na nchara - zụta Igodo Ngwaahịa Izu 1!
Tochọrọ ịghọ onye otu Gamepron "VIP Club"? Zụta Igodo Ngwaahịa Ọnwa Onwa Taa!
Nchara ọhịa mbanye anataghị ikike Ozi
Nchara ọhịa bụ ihe niile na-na-otu mbanye anataghị ikike ngwọta maka ụdị ọ bụla nke nchara player. Ma ị kwadoro akụkụ PvP ma ọ bụ PvE nke nchara adịghị mkpa, ebe ọ bụ na enwere atụmatụ dị iche iche nke ga - enyere gị aka ime ihe ukwu na ọnọdụ ọ bụla! Don't na-adịghị na-eji ọtụtụ awa na-agbalị nkọ gị na-akụ ma na-egweri ihe, dị ka anyị nchara Forest mbanye anataghị ikike na-aga ime ka ihe niile na-adị mfe. Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke enweghị nchara nchara Hacks dị na ntanetị siri ike ịghafe, mana ekele Gamepron ga-ekpuchi gị mgbe niile! Na-eche ike nke Rust Forest taa.
E nwere ọtụtụ atụmatụ ị ga-atụle n'ime Ngwá Ọrụ Rust Forest, dị ka Iro ESP na Ozi (Ebe dị anya, Ngwá Agha / Nkebi ESP, NPC ESP, wdg). Wouldfọdụ ga-asị na Rust Aimbot anyị matara nke ọma ebe ọ bụ na ọ na - egosipụta justgbanwe Agbanwe / Mbelata Ego na Ọkpụkpụ Prioritization, yana FOV Circle ama ama.
NPC esp (wolves, bea, wdg)
Ngwa esp (Loot, stashes, ores)
Aimbot na legit amụma
Ebumnuche Na-achọ (Nzuzo na mmiri)
Enweghị mmebi emebi
nkịtị agwọ mod
Banyere nchara ohia
Ndị ọrụ hụrụ nnọọ Rust Forest Hack, yana ezi ihe kpatara ya. Enwere ọtụtụ atụmatụ dị ịtụnanya iji tụlee iji, ọtụtụ n'ime ha ga - enyere gị aka na ntọala PvP na PvE. NoSpread dị mma maka mgbe ịchọrọ iwepụ mgbọ, ebe Mod Spiderman anyị ga-enye gị ohere ịrapara na mgbidi ma gbagoo ebe ọ bụla ịchọrọ! Ezigbo Nzube na-enye gị ọdịdị na-adịghị ọcha, n'ihi na ndị mmadụ agaghị eche na ị na-aghọ aghụghọ ule (ọ bụ naanị ọkachamara nwere nkà), ebe FOV Circle ga-enye gị ohere ịlele onye ọ bụla nọ n'ọhịa gị. Njirimara ndị a anaghị akwụsị akwụsị!
Gini mere iji jiri Rust Forest over ndi ozo?
Ndị ọzọ na-eweta ọrụ ga-emechu gị ihu n'otu ụzọ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, ụfọdụ ndị ọrụ anyị amụtala na ụzọ ahụ siri ike. Ahịhịa ahụ anaghị acha akwụkwọ ndụ n’akụkụ nke ọzọ, ma ozugbo ị nwalere Rust Forest maka onwe gị, ị gaghị eche na ị ga-achọ ebe ọzọ. Anyị raara onwe anyị kpamkpam nye ndị ọrụ anyị
a nti ahụmahụ, n'agbanyeghị nke nchara mbanye anataghị ikike ha na-eme atụmatụ na iji. Mgbe ịchọrọ ịmara na ị na-eji nchara nchara anataghị ikike (nke ahụ enweghị kpamkpam malware na ọdịnaya ndị ọzọ dị njọ), Gamepron bụ ụlọ ọrụ ị nwere ike ịdabere na ya. Tinye okwukwe gị na Rust Forest, tụkwasị anyị obi!
Get ga - ejikwa akara menu dị iche iche dị iche iche wee nwee ike ijikwa akara gị. Ọtụtụ n'ime ndị ahụ nchara Hacks ị chọta online ga-ada obere mgbe ọ na-abịa ha na-egwuregwu egwuregwu, dị ka ha buru ibu buru ibu (na-ewere ohere na ihuenyo gị) ma ọ bụ naanị inu ke ofụri ofụri. Anyị na-enye gị nhọrọ nke ịmegharị ahụmịhe gị kpamkpam, ma ọ bụ naanị ịhapụ ihe ka ọ bụrụ ma kpọọ usoro ntọala. Iswa bụ oporo gị mgbe ị họọrọ iji aghụghọ na Gamepron eji Aghọ Aghụghọ Ule, karịsịa na a lanarị egwuregwu dị ka nchara. Choo otutu ihe site na ime ka ESP banye n’ime egwuregwu!
A1. Onye na-ebu ọkụ a ga-achọ iji ngwaọrụ mpụga USB (iji gbanye / wepụ). Ọ gaghị arụ ọrụ itinye ya na diski dị n'ime (dika C ma ọ bụ D).
A6. Ee, a cheat na-akwado fullscreen.
Njikere Na-achị na anyị nchara Igbo Hack?